Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-dalamby » Fiaran-dalamby mora vidy avy any Londres ka hatrany Edinburgh
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao farany momba an'i Scotland • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny fiaran-dalamby mora vidy avy any Londres mankany Edinburgh dia mety hanakorontana ny serivisy sy ny serivisy ankehitriny
Ny valim-pifidianana vao haingana dia nanambara fa ny 11% amin'ireo mpamaly manerantany izao dia manana teti-bola fialantsasatra ambany noho ny pre-COVID, ary ny 37% dia tsy afaka mandeha manao vakansy atsy ho atsy ka horaisina ny serivisy vaovao misy vidiny ambany.
Ny fandefasana lalamby mora vitan'i Lumo dia miatrika olana ara-teti-bola sy tontolo iainana.
Ny maodelin'ny serivisy fiambenana mora vidy Lumo dia mety ho lasa malaza be amin'ny mpandeha.
Na dia lafo aza ny serivisy, misy Wi-Fi maimaim-poana ary fialamboly on-demand ho an'ny rehetra.
Ny fanoloran'i Lumo serivisy fiambenana mora vidy dia mety hanakorontana ny serivisy sy ny serivisy misy eo anelanelan'i Londres sy Edinburgh. Ny maodely mora vidy miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fanamaivanana ny fiatraikan'ny tontolo iainana dia hiorina tsara amin'ny fanovana ny fironana mpandeha rehefa sitrana ilay sehatra amin'ny areti-mandringana.
Mety ho lasa malaza ny serivisy lalamby mora vitan'i Lumo. Ny mpandeha anglisy dia lasa zatra amin'ny saran-dàlana avo lenta sy serivisy ambany kalitao izay, alohan'ny COVID, dia be loatra matetika. Ny fanombohana ny làlan'ny mpandraharaha tetibola vaovao eo anelanelan'ny Edinburgh sy Londres dia nanjary hery manelingelina noho ny tsy fisian'ny fifaninanana eo amin'ireo mpiasan'ny lalamby ao amin'ny UK. Na dia mora vidy aza, Wi-Fi maimaim-poana ary fialamboly on-demand dia ho azon'ny rehetra. Amin'ny fotoana fitsangatsanganana dia 10 minitra lava noho ny an'ny LNER amperin'asa, Lumo dia tsara toerana ahazoana tombony eo amin'ny tsenan'ny fifaninanana.
Miaraka amin'ny teti-bola natsangana, ny fampidirana serivisy fiambenana mora vidy dia hilalao tsara amin'ireo mpandeha voafetra ara-bola raha mirongatra ny fangatahana ao an-toerana any UK. Ny saran-dàlana ambany dia tena ilaina amin'ny famaliana ny fihenan'ny vidin'ny mpandeha. Betsaka no nahatsapa ny kaikitra ara-bola avy amin'ny valanaretina ka nahatonga ny fihenan'ny tetibola momba ny teti-trano sy ny dia. Toy izany koa, ny valin'ny fanadihadiana natao tamin'ny 2021 momba ny mpanjifa dia nanambara fa ny 62% n'ireo mpihetsiketsika UK dia 'faran'izay', 'kely', na 'somary' niahiahy momba ny toe-bolany manokana, izay vao mainka nanamafy ny filàna serivisy fiambenana ambany kokoa.
Ny safidy mampanan-karena Lumo's £ 15 (US $ 20.78) safidy iray làlana farany ambany indrindra dia afaka mandrisika ny fangatahan'ny dia eo anelanelan'i Londres sy Edinburgh. Ny saran-dàlana ambany dia heverina ho mora kokoa noho ny sidina mora vidy ary mety hametraka tsindry fifaninanana amin'ny easyJet ary, amin'ny lafiny iray, British Airways. Ny vidiny dia fanalahidin'ny fisintonana ny fomba amam-panao mandritra ny dingana fanarenana COVID-19, ary Lumo dia manana maodely ara-barotra mety hahomby.
Ireo mpitsangatsangana dia azo inoana fa voataona amin'ny fomba ara-tontolo iainana namana na vokatra. Ny fanadihadiana nataon'ny mpanjifa Q1 2021 dia nanambara fa 70% ny UK ny mpamaly dia 'foana', 'matetika', na 'indraindray' voataonan'io antony io.
Ny fifantohan'i Lumo mavesatra amin'ny asa atao amin'ny tontolo iainana, ny ho avy dia manaporofo ny maodelin'ny orinasany. Ireo mpandeha izay matetika manidina eo anelanelan'ny tanàna roa dia mety ho voatarika mankamin'ny safidy ara-tontolo iainana sy mora kokoa. Ny misafidy ny mandeha amin'ny lamasinina mandeha amin'ny herinaratra Lumo tanteraka amin'ny sidina dia hampihena ny fandefasana gazy karbonika amin'ny dia fahenina amin'ny sidina, hoy ny mpandraharaha. Manamafy hatrany ny fifantohany amin'ny tontolo iainana, ny mpandraharaha dia hanolotra sakafo 50 mifototra amin'ny zavamaniry an-tsambo ary 100% nomerika hialana amin'ny fako taratasy. Miaraka amin'ny fitomboan'ny ahiahy momba ny tontolo iainana, ity hetsika ity dia afaka nahita an'i Lumo lasa mpiasan-dalamby mahatsiaro tontolo iainana.